Blockchain News 9 EyoMqungu 2018 - Blockchain News
EyoMqungu 9, 2018 admin
imithetho Cryptocurrency ecetywayo Vermont
A mthetho karhulumente eVermont iye yaphakamisa bill ukudala inkqubo-sikhokelo omtsha olawulo ukusetyenziswa kobugcisa blockchain.
Ukongezelela ngokuyala iingxelo eziliqela cryptocurrencies kunye blockchain, ngayo ngokukodwa icacisa indlela urhulumente mabazihlele mveliso ezithile “currency yedijithali iinkampani enomda kubutyala,” ngokukodwa lawo asebenza uthungelwano zabo.
Abo iinkampani, ukuba oyilwayo samkelwe, kufuneka ukuba ahlawule “ngokohlobo imali yayo yedijithali elilingana irhafu transaction ku $ 0,01” nanini na xa iyunithi entsha ye cryptocurrency wadala, wasebenza okanye idluliselwe.
“A Inkampani currency lwedijithali enomda kubutyala uxolelwa iirhafu ngenye indlela esebenzayo” ufund bill.
Lo Mthetho osaYilwayo entsha likwafuna “Fintech Summit,” leyo yayiza ndawonye achaphazelekayo karhulumente kunye noshishino ukuze baxoxe ngendlela eVermont uyakwazi ukukhuthaza ukusetyenziswa ngokubanzi Tech ngayo. wayeza kunikela karhulumente $25,000 ukunceda ukuxhasa isiganeko, phantsi kwephiko le-Arhente of Commerce and Development Community.
CEO JPMorgan Chase Jamie iDimon ndiyimisela lizisole besithi Bitcoin bubuxoki
JPMorgan Chase USihlalo & CEO Jamie kwabasindileyo ngoLwesibili uyazisola izimvo elidlulileyo apho wathi Bitcoin ngobuqhophololo kwinkomfa yebhanki Septemba.
Ngelo xesha, Kwabasindileyo wathi wayeza umlilo abarhwebi JPMorgan ukuba nawe lo crypto-lwemali.
"Le block chain mbamba. Unokuba crypto yen kunye zeerandi kunye izinto abanjalo…"Kwabasindileyo wathi kudliwano-ndlebe kuphela ne Fox Business.
Le bitcoin kum Wayesoloko oko oorhulumente va ngob malunga bitcoin njengoko kuya kuba elikhulu, kwaye nje ukuba i imbono eyahlukileyo kunokuba abanye abantu. Andinamdla ukuba lukhulu kweso sifundo lonke.
US Federal Reserve Bank uMongameli: Bitcoin ayilo okhuphisana obuphathekayo kwi US dollar
Bitcoin kunye nezinye iimali digital musa ukumela ingozi enkulu U.S. dollar, EMinneapolis Hluthani uMongameli neel Kashkari uthe.
“Mna andiboni bitcoin njenge okhuphisana credible ukuya idola kwi-United States of America, kwaye nesizathu soko njengomqobo lokungena kuwe udala lwenani yaye mna ekudaleni imali yam virtual … ngu zero,” Wathi ngexesha ukubonakala esidlangalaleni eMinnesota.
Kashkari wavuma ukuba bitcoin kunye nezinye cryptocurrencies ingathatha kwi indima enkulu kwihlabathi kwixesha elizayo, kodwa wathi ngokuba ngoku bahlale uphawu lombuzo.
“Ngoko ke zonke ezo ngqekembe ezintsha alt ukuba wadala yonke imihla, ke ukuba nibe uthi kukho kuphela bitcoins ezininzi kangangokuba eziya misela ukuba, ukuba uthi nerejista nazo zonke ezinye ezi ngqekembe alt uyakwazi ube emali, ngokuba ungazi ukuba zeziphi ukuba sithembele,” uthe. “Ndicinga nje oku indlela ende ukuya phambi kokuba sazi Ulogungqisa njani oku ngaphandle.
bazisebenzise market Bitcoin sivulelekile ukuba abatyali-Thailand ukuba
Phillip Securities Thailand eye wavumela abatyali-Thai ukuzithelekelela bitcoin ngokusebenzisa yezabelo jikelele inkonzo yorhwebo yamazwe ngamazwe, ngelixa nabalawuli market Thailand zifakiwe kwi-ukuvumelana ukuba indlela esa kusemthethweni.
nkonzo ibonelela bitcoin amakamva zokurhweba kwi Chicago Board Options Exchange (CBOE) kunye Chicago Mercantile Exchange (CME).
umlawuli ophetheyo Low See Kiong uthe abanye abatyali-Thai anomdla bitcoin bakwazi ukwamkela umngcipheko obekwayo amakamva mali.
“Ukusebenzisa bitcoin njengento yexabiso ingxaki kwi CBOE kunye CME iya kukhokelela ukwamkeleka kakhulu amakamva bitcoin njengoko iinkqubo zentlawulo ethembekileyo kwaye zilawulwa yi-US Securities and Exchange Commission,” Mr Low uthe ukukhululwa press.
“Njengoko oku [utyalo-mali] mveliso phantsi kweliso elawulayo esemgangathweni, indawo inkxalabo kule meko ayikho malunga ubuqhetseba okanye imali ngokungekho semthethweni, kodwa kunokuba njani le mveliso uye emngciphekweni omkhulu ukhuseleko,” uthe kwingxelo.
Prime Minister Prayut Chan-o-cha sisandula yayalela i-Ofisi yoMphathiswa wezeMali ukuba ukufundisa abantu malunga neengozi zotyalo-mali bitcoin.
Switzerland uqala Blockchain umsebenzi amandla
Urhulumente Swiss iye yasungula iqela elitsha kukungciba sikhokelo zolawulo ezingqonge zokuqala blockchain kunye ICOs.
Taskforce Blockchain - elikhokelwa nguMphathiswa wezeMali Ueli Mausrer noQoqosho kunye noMphathiswa weMfundo Johann Schneider-Ammann - ubandakanya zombini amagosa yase kanye zendawo, kwakunye namalungu zokuqala ezahlukeneyo blockchain kunye nabameli zomthetho, ngokutsho lokwaziswa.
Eli qela iza kujonga izikhokelo ezisemthethweni ICOs kunye neenkampani blockchain eyingqongileyo, xa usebenza kaRhulumente Secretariat for International Financial Matters - umzimba federal inoxanduva lokuphumeza inkqubo kwiimalike zemali kunye abamele iimfuno mali karhulumente kwimida.
Schneider-Ammann uncome ngokubandakanywa iinkampani blockchain kwincoko ezingqonge sikhokelo zabo zomthetho.
uqhube: “Blockchain iye ibaluleka ngakumbi njengoko iteknoloji ye mveliso ezininzi, hayi nje ngemali crypto. Into efunekayo ummiselo zobunene, leyo kuvula amathuba ngesikhundla Switzerland ngoxa kwangaxeshanye nokunciphisa iingozi.”
kwintlanganiso yokuqala Taskforce Blockchain iya kuba ku Jan. 12, 2018.
Isicelo kume kuqala Mast zithunyelwe
Isindululo elide-emi ukuba “ngobuchule” izivumelwano smart kumnatha bitcoin ri tsariweke hi nje uthathe inyathelo elinye ukusondela ukuba ukuphunyezwa.
Developers ziye kungeniswa isicelo kume for Merkelized Abstract syntax Trees (imasti), uphawu okokuqala le izivumelwano smart isindululo iye yaba ngumba isicelo kume ofuna iludibaniso lwayo ikhowudi bitcoin xa.
Ezi izivumelwano zabucala smart iza kuvumela abasebenzisi ukuchaza neendlela zabo intlawulo iza yinkqubo apho, eyenza ukuba izinto eminzinzi kuqwalaselwa inkqubo. Kwezivumelwano smart ngoko uza ngokwabo.
Indibaniso BIPs kwakhona belinokukwazi ukuvumela ezi iimvumelwano smart ukuba igcinwe ngendlela indawo kwi bitcoin blockchain kanye, ithetha ukuba akazange avume ukuya isixa esikhulu isithuba block, okanye ixabiso lwedata ukuba igcinwe ngaphakathi ibloko nganye intengiselwano.
Ukuba ababhekisi phambili kunye bitcoin noluntu ngokubanzi kukholiswa utshintsho, oko kongezelelwa ukuba bitcoin ngendlela ifolokhwe soft.
A umthombo news.hodlhodl.com
Eidoo kuzisa i Hybri ...
Post Previous:amacebo yocingo ICO
Post Next:Ngubani owenza igalelo elikhulu kwishishini crypto? Top 7